Himalaya Dainik » ‘एक कठ्ठा जमिन’ मात्रै भएका प्रचण्डले कहाँबाट जुटाउँछन् पूर्वलडाकुलाई तलब ?
‘एक कठ्ठा जमिन’ मात्रै भएका प्रचण्डले कहाँबाट जुटाउँछन् पूर्वलडाकुलाई तलब ?
अर्कातर्फ सम्पत्ति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखाउँदै आएका छन् । यसैले उनको सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारी सुरक्षा दस्ता अघिपछि परिचालन हुँदै गर्दा उनी आफैँले रहर गरेर अहिले पूर्वलडाकुसमेत खटाएका छन् । तिनीहरूको तलब सुविधाको विषयमा धेरैको चासो देखिएको छ ।
यसअघि प्रचण्डको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डिएसपीको कमान्डमा २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ४७ जना गरी ७३ सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । हालै, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७मा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ र प्रहरीका दुई जना मात्रै खटाउने उल्लेख भएसँगै दाहालको अगुवा स्कर्टिङ गाडीसहित ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् ।
हाल उनको सुरक्षामा १८ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । तर, प्रचण्डले ती सुरक्षाकर्मीले आफूलाई नपुग्ने बताउँदै कम्तीमा १५ तालिमप्राप्त माओवादी पूर्वलडाकु सुरक्षामा राखेका छन् । यो संख्या आवश्यकताअनुसार बढ्ने पनि गर्छ । आवश्यक मात्रामा पूर्वलडाकुको टोली अगुवा स्कर्टिङ र कार्यक्रमस्थल व्यवस्थापनअन्तर्गत खटिन थालिसकेको पूर्वलडाकुसमेत रहेका दाहाल–नेपाल समूहका नेता युवराज दुलालले बताए ।
खानपान तथा सवारीसाधन खर्चबापत कम्तीमा साँढे दुई लाख खर्च भए कुल दश लाख खर्च हुने देखिन्छ । यतिधेरै खर्च प्रचण्डले कहाँबाट जुटाइरहेका होलान् ! प्रचण्डको आम्दानी कति ?
प्रचण्ड भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । सांसद भएबापतको तलबभत्ताले जीविका चलाउँदै आएका उनको त्यो स्रोत पनि संसद् विघटनसँगै बन्द भएको छ । अहिले सुरक्षाका लागि थपिएका १५ लडाकुबाहेक उनको सचिवालयमा झन्डै १० भन्दा बढी सदस्य काम गर्दै आएका छन् । जसमा स्वकीयसचिव, निजी सहयोगी, सहयोगी, सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सुरक्षा सल्लाहकारलगायत उनीसँग छन् ।
यसअघिका सचिवालयमा १० र अहिले सुरक्षामा १५ पूर्वलडाकु रहँदा अहिले प्रचण्डसँग कम्तीमा २५ जना दैनिक सँगै रहन्छन् । प्रचण्डले दैनिक आफूसँगै खटिने २५ जनाका लागि प्रतिव्यक्ति कम्तीमा मासिक ३० हजार दिए पनि सात लाख ५० हजार खर्च हुन्छ ।
उनीहरूको खानपान तथा सवारीसाधन खर्चबापत कम्तीमा साँढे दुई लाख खर्च भए कुल दश लाख खर्च हुने देखिन्छ । यतिधेरै खर्च प्रचण्डले कहाँबाट जुटाइरहेका होलान् ! प्रचण्डको आम्दानी कति ? प्रचण्ड विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् । संसद् छँदा मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, आवास सुविधा १८ हजार, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च तीन हजार, धाराबिजुलीको दुई हजार, अतिथि सत्कार र विशेषभत्ता मासिक एक हजार गरी उनको ८० हजार दुई सय ३० आम्दानी थियो ।
अत्यन्तै न्यून सम्पत्ति र आम्दानी भने बन्द भएको अवस्थामा रबाफिलो जीवनशैली अपनाउन झनै सहयोगी थप्दै गएका उनीमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ‘नदेखिएको आम्दानीको स्रोत के हो ?’ सम्पत्तिको बहसको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डमाथि सम्पत्ति विवरण लुकाको र छलढाँट गरेकोजस्ता आरोप छन् ।
तर, उनीनिटक नेता कार्यकर्ता भने प्रचण्ड सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आलोकमा हुर्केका नेता भएको, भ्रष्टाचार नगरेको,नातागोता नपोसेको, हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको, राजनीति स्वयंसेवा हो, आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेका प्रचण्डसँग कहाँबाट सम्पत्ति आउनु भनी प्रतिवाद गर्दैछन् ।
तर, आलोचकका लागि भने प्रचण्ड गरीब हुन भन्ने कुरा तर्कंसंगत लाग्दैन । नत उनको रबाफिलो जीवनशैलीले नै त्यो पुष्टि गर्छ ।
२०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमती सीता दाहालको नाममा चितवनको भरतपुरमा १ कठ्ठा जग्गा र तीन तोला सुन भएको उल्लेख छ ।
यी दुवै आफ्नो स्वआर्जन नभएर पैतृक सम्पति भएको उल्लेख छ । उनको नाममा कुनै पनि ब‌ै‌कमा खाता छैन, शेयर छैन र सवारी साधन पनि छैन । तरपछि उनको जीवनशैली राजाको भन्दा बढी बिलासीपुर्ण छ ।